WAA MAXAY SABABTA AY BAKAYLAHA U KORAAN (KORAAN SI LIIDATA OO AAN CULEYSIN): WAXA LA SAMEEYO, WAXA LA QUUDIYO - XOOLAHA
Waa maxay sababta bakaylaha si liidata u koraan oo aan culeysin
Markaad xayawaanka xoolaha beerta, su'aasha koritaankooda firfircooni waxay ka fog tahay meesha ugu dambaysa ee liiska beeraha ee walwalka, sababtoo ah tusayaasha wax soo saarka si toos ah waxay ku xiran yihiin tan. Xaalad waliba, waxaa jira sababo shakhsi ah ee horumarinta saboolka ah ee xayawaanka, laakiin sida ugu badan ee bakaylaha ka welwelsan yihiin, marka hore, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay dhowr arrimood oo waaweyn. Maxay yihiin sababta iyo sida loo xalliyo dhibaatada - akhri.
Waa maxay sababta bakaylaha si liidata u koraan
Inta badan bakaylaha waxaa lagu magacaabi karaa "Baaskiil hore", sababtoo ah bakaylaha yaryar way koraan oo horumariyaan si dhakhso ah, mararka qaarkoodna waxay diyaar u yihiin inay dhalaan 4 bilood. Hase yeeshee, tani waxay suurtogal u tahay miisaanka jirka oo ku filan, marmarka qaarkoodna si cad ayaa udhaca. Sababaha ugu muhiimsan ee koritaanka iyo horumarinta cilladahan quruxda badani waxay noqon karaan jiritaanka cudur, qalad aan sax ahayn, xaaladaha guriyeynta oo liita iyo macaamiil qaraabada (gaar ahaan kuwa dhow). Tixgeli mid kasta oo ka mid ah arrimahan si aad u dhow.
Sababtoo ah jirro
Ka mid ah cudurada caadiga ah ee bakaylaha guriga, waxaa jira laba cudur oo keliya oo ku kala duwan saameyn la dareemayo koritaanka iyo horumarinta xayawaanka: Coccidiosis mindhicirka iyo weerarka helminthic.
Coccidiosis mindhicirka - cudur dabiici ah oo sababay sunta cayayaanka aan qotomiska lahayn ee coccidia (ee bakaylaha waxaa jira ilaa 10 nooc oo saameyn kara ma aha oo kaliya mindhicirrada, laakiin sidoo kale beerka xayawaanka).
Waxaan kugula talinaynaa inaad barato calaamadaha coccidiosis ee bakaylaha iyo hababka daaweynta.
Astaamaha ugu weyn ee cudurka waa shuban iyo caloosha oo isdaba-joog ah, oo ay weheliyaan jahwareer. Shaqsiyaadka jirran si dhakhso ah ayey u lumiyaan miisaanka, habka jirka oo hoos u dhaco, timuhu noqoto mid cidhiidhi ah, iyo qaabab daran, waxyeellada dhaqdhaqaaqa ee mashiinka iyo casiraadyada addimada. Caadi ahaan, muddada cudurka waa 10-15 maalmood, taas oo lagu garto calaamado la yaqaan. Si kastaba ha noqotee, qaabka beerka ee coccidiosis (sida caadiga ah ayaa dhameystiraya mindhicirka), calaamadaha oo dhan way sii jirayaan, ilaa 50 maalmood. Haddii wakhtigu uusan bilaabmin daaweyn, markaa dhimashada xayawaanku waa lama huraan.
Ma taqaanaa? Bakeylehu waxay leeyihiin ilmo-galeenka ilmagaleenka ah, sidaa daraadeed isla mar ahaantaana waxay xirtaan laba xabbadood oo bakaylo ah oo uur leh rag kala duwan waqtiyo kala duwan.
Cilmi-baaris sax ah ayaa la samayn karaa oo kaliya iyada oo ku saleysan xogta laga soo bilaabo anamnesis, oo lagu daray natiijooyinka baadhista shaybaarka, ka dibna waxaa badanaa loo qoraa daaweyn. Ka mid ah daawooyinka caansan ee loogu talagalay coccidiosis mindhicirka ee bakaylaha waa kuwan soo socda:
Baycox - Halabuurka, soo bandhigay foomka dareeraha iyo loo isticmaalo waraabinta xayawaanka buka. Waxaa loo tixgeliyaa habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo loona daaweyn karo cudurka la sharraxay.
"Sulfadimetoksin" - Kiniiniyada, oo lagu taliyey in lagu jajabiyo xaalad budo ah ka hor inta aan la isticmaalin. Foomkan, daroogada waxaa lagu daraa quudinta bakaylaha, adoo raacaya nidaamka soo socda: maalintii koowaad, 0.2 g halkii 1 kg ee miisaanka nool, iyo afar maalmood oo xigta, 0.1 g halkii 1 kg oo miisaankeedu yahay. Ka dib 5-7 maalmood, ku celceli koorsada.
"Furazolidone" - Daawo kale oo kiniin ah, sida badanaa loo isticmaalo foomka dhulka. Koorsada daaweyntu waa 1 asbuuc, inta lagu gudajiro 30 mg oo walax ah oo loo isticmaalo 1 kg oo ah miisaanka nool ee bakaylaha. Isticmaalka daroogadani ma baabi'inayso jeermiska cudurka coccidiosis, laakiin waxay ka caawineysaa jirku inuu la qabsado cudurka.
"Ftalazol" + "Norsulfazol" - Waxaad siin kartaa xayawaanka 5 maalmood marka loo eego 0.1-0.3 g halkii 1 kg ee miisaanka nool, iyo fasax ka dib todobaad kadib, ku celceli koorsada.
Duufaan woqooyi. Joogitaanka ukunta duxda ee jirka waa sabab kale oo badan oo ah miisaan ku filan oo ku filan xoolaha.
Gudaha dul saarnaanta waxay la socdaan raashinka ama cagaarka waxayna awoodaan in ay sii wadaan hawshooda muddo dheer, iyo haddii ay jiraan xaalado wanaagsan oo horumarineed, waxay si deg deg ah u rogaan dirxir, kuwaas oo sii wadi doona, ka tegaya dirxiyo badan oo cusub.
Waa muhiim! Ka dib markii la waayay dhammaan calaamadaha coccidiosis, shakhsiyaadka la reystey ayaa weli ah kuwa sidan oo kale ah cudurkan bil kasta, sidaa daraadeed waxay u fiicantahay in si deg deg ah loogu wareejiyo aagga karantiilka.
Wixii nafaqeyntooda, gooryaanku waxay isticmaalaan maaha oo keliya maaddooyin waxtar leh oo la yimaada cuntada, laakiin sidoo kale unugyada xayawaanka, taas oo ah sababta ay cunaan cunto badan, laakiin waxay ku yaryihiin sidii ay u yaraayeen timaha iyo muuqaalka muuqaalka. Haddii tuhunada beeralayda lagu xaqiijiyo natiijooyinka falanqaynta la xidhiidha, markaa waxaa habboon in si deg-deg ah wax looga qabto daadinta. Ujeeddooyinkan, daawooyinka sida Albendazole iyo Gamavit waxaa badanaa loo isticmaalaa in ay midba midka kale buuxiyaan. Nidaamka codsiga kiiskan wuxuu u egyahay sidan:
Maalinta kowaad, "Gamavit" waxaa lagu duraa duritaanka subcutaneous (dadka shakhsiyaadka ah, 0.5-1 ml halkii madax, xayawaanka qaangaarka ah - 1.5-2 ml).
Maalinta labaad, cirbada ayaa lagu soo celiyaa qiyaasta isku midka ah.
Maalinta 3aad, "Albendazole" waxaa lagu daraa "Gamavit" ee xisaabinta 0.75 ml oo ganaax ah 1 kg oo culus oo nool. Xisaabinta daroogada waa in si gooni ah loo qabtaa marin kasta, iyo qiyaasta ugu sareysa ee loo qoondeeyey waa in loo qaybiyaa laba jeer.
Maalinta 4-5aad, waxaad u baahan tahay inaad ku celiso habka, sida maalinta 3aad, iyo saddexda cisho ee soo socota waxay isticmaalaan "Gamavit" oo keliya oo ah cirbadeynta subcutaneous.
Nafaqada haboon ee bakaylaha - waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in aad fiirsato naas-nuujiyaha. Joogitaanka cunto isku dheeli tiran oo leh qiyaasta ugu wanaagsan ee nafaqooyinka xagaaga iyo jiilaalka waa inay ka hortagaan dhibaatada miisaanka korodhka, dabcan, maqnaansho sababo kale oo dhacdadan ah. Qeybaha qasabka ah ee cuntada ee xayawaankaaga xayawaanka ah waa inay ahaadaan:
caws cagaaran xagaaga (waxaa wanaagsan in la siiyo alfalfa, dhirta, vetch, lupin macaan, nettle, løndels, qorshe, burdock, tansy) ama cagaarka cusub ee xilliga qaboobaha;
khudaarta cagaaran (gaar ahaan dabacasaha);
xayawaanka: caws, xayawaan geedo ah (caws iyo caleen);
isku darka cuntada isku dhafan oo ay ku jiraan keega, hadhuudhka, miro, bran, iyo waliba isku darka loogu talagalay xayawaanka kale ee guryaha (kaliya maaha shimbiraha);
qashinka cuntada: baastada, rootiga la qalajiyey (crackers), haraadiga koorsooyinka koowaad iyo labaad, laakiin kaliya cusub;
dushooda (karootada, xididdo, gawaarida, baradhada), caleemaha kaabajka.
Sidoo kale, waa in aynaan ilaawin qaybaha muhiimka ah ee liiska, sida macdanta iyo fitamiinada, oo buuxiya jirka nafaqooyinka xayawaanka. First of dhan, cuntada lafaha, nayl iyo miis miiska waxay noqon doontaa mid waxtar leh in arrintan.
Ogolow in bakaylaha waa in ay helaan cunto nafaqo leh oo caafimaad leh. Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido goorta iyo sida loo quudiyo xayawaanka maqaarka guriga, iyo sidoo kale tixgelinta caadooyinka quudinta ee bakaylaha xilliga qaboobaha.
Ilaa inta suurtagal ah, caanaha dufanka leh, saliidda kalluunka, subagga miiraha iyo caleemaha waa in la isticmaalaa, taas oo si gaar ah ugu habboon xaga xilliga qaboobaha, marka xayawaanka beeraha ay yihiin kuwo ku filan fitamiinada. Quudinta quudinta oo keliya hal nooc oo cunto ah waxay u horseedi kartaa korodh miisaanka iyo kobcin xadidan.
Video: sida loo quudiyo bakaylaha koritaanka degdegga ah
Iyadoo la tixgelinayo sababaha suurtagalka ah ee koritaanka ugu yar ee qaybtooda la soo xaadiray, ha ilaawin inaad fiiro gaar ah u yeelato shuruudaha xabsiga. In baqashada, nadiifinta iyo qalajinta waa in had iyo jeer waa la dayactiray, iyo xayawaanka yaryar waa in lagu hayaa on dabaqyada shabaqa (16x24 mm Mesh).
Sida cabbirka qafiska, ka dibna wax kasta waxay ku xiran yihiin lafaha xayawaanka, laakiin xaalad kasta waa inay leeyihiin meel ku filan oo dhaqdhaqaaq xor ah (celceliska celceliska meelahan waa 150x70x70 cm). Intaa waxaa dheer, xayawaankaaga xayawaankaaga waa in ay si joogto ah u helaan biyo nadiif ah, hilib iyo isku darka cuntada, laakiin waxaa lagula talinayaa inayan ku dhicin dareeraha ama quudinta, taas oo loogu talagalay cabitaanka khamriga gaarka ah iyo nuujiyaha. Baqaadaha yar-yar, baqashada iyo qoyaanka, bakaylaha waxay dareemaan wax aad u dhib badan, badanaaba jiran waxayna xitaa dhiman karaan, ma ahan inay sheegaan hoos u dhaca tilmaamaha wax soosaaraya.
Ma taqaanaa? Bakteeriyada miisaankeedu yahay laba kiilogaraam ayaa awood u leh in ay cabaan biyo badan sida cabbitaanka tobanka tobaslaha ah.
Mate la xidhiidha
Inbreeding waa dhibaatada kale ee suurtogalka ah ee kobaca xaddidan. Markaad la xiriirto qaraabo dhow (waalidiinta iyo carruurta ama walaalaha iyo walaalaha), unugyada isku midka ah ee isku darka ah, waxay keenaan embriyaha daciifka ah. Dhalashada ka dib, xayawaanka noocan oo kale ah ayaa si tartiib ah u koraan, wey jiran yihiin marar badan waxayna keenaan caruur yar. Xaaladaha qaarkood, inbreeding waxay noqotaa sababta ugu weyn ee dhalashada caruurnimada cunuga ah ama dhalatada.
Cawaaqibka laysku maandhaafka ah ee la xidhiidha maaha midka ugu horreeya, laakiin sidoo kale kuwa duugoobka ah, sidaas awgeed jilayaasha xirfadleyda ah waxay si joogto ah u cusbooneysiiyaan ragga ku saabsan beerahooda ama waxay bedelaan baqdintooda (haddaynu ka hadlayno taranka xoolaha ee ballaaran).
Bannaanka cagaaran waa inuu ogaadaa waxa ay tahay in uu doorto marin-u-helidda bakaylaha.
Dhallinta dayactirka dhalinyarada, oo loo wareejiyay lo'dii ugu muhiimsanaa, isla hal-abuurkan ayaa loo wareejiyaa waaxaha kale, wiilashuna waxay dhashaan 5-6 sano ka dib meeshii ay awoowayaashoodu bilaabeen in la isticmaalo.
Sidaas awgeed, shakhsiyaadka la xidhiidha shakhsiyaadka ayaa suurtogal ah kaliya jiilka 6-7aad, si loo yareeyo saamaynta xun ee ku-tallowga ah, waxaa lagula talinayaa inay ku koraan qaraabada xaalado kala duwan. Noocyada aadka u liidashada ee bakaylaha waxaa lagu caddayn karaa oo kaliya kaliya tarbiyada qulqulaya, taas oo ah, iyada oo loo marayo xariijinta qashinka, oo leh heer sare oo ah homozygosity. Iyada oo adeegsiga xirfad leh ee sayniska, saynisyahanka, runtii, ay ku guuleysteen in ay xoojiyaan oo kala tagaan sifooyinka qumman ee qiimaha, laakiin xaaladaha kale ee tijaabooyinka ah looma tixgelin karo haboon.
Ma taqaanaa? Celcelis ahaan, bakayle dheddig ah ayaa qiyaastii 5 daqiiqo maalin kasta, laakiin waxay ku xiran tahay baruurta sare ee caanaha, waqtigan ayaa ku filan carruurta.
Noocyada kala-soocida ee xayawaanku marwalba way ka baxaan muuqaalkiisa muuqaalkiisa, maadaama ay tahay in badan ama ka yar u hoggaansamaan heerarka la aqbalay ee taranka. Ornamental ama bakaylaha duurjoogta ayaa si firfircoon kor ugu kaca ilaa saddex bilood, iyo lix bilood jir, koritaankoodu wuxuu gebi ahaanba joojinayaa. Qiimaha kama dambaysta ah ayaa laga filan karaa 8 bilood, marka xigtana xayawaanku isbeddel maaha. Dabcan, haddii cayayaanka uusan si dhab ah u fahmin naasuhu, ka dibna waxaa laga yaabaa in lagu iibiyo "ilmo" ubax halkii uu wakiil ka noqon lahaa isbedelka hilibka, sidaas awgeed koritaan xadidan ayaa noqon doona mid caadi ah xataa xitaa cunto isku dheeli tiran.
Waxaad hubaal noqon doontaa inaad ka fekereyso sifooyinka dabeecada dawacada ee dawacada iyo gaar ahaan guriga.
Daryeel iyo tallaal
Yareynta halista dhibaatooyinka culeyska ayaa kaa caawin doona fulinta shuruucda daryeelka ee bakaylaha iyo tallaalka waqtigii loogu talagalay. Midka ugu horreeya iyo mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan marka xayawaanka xoolaha lagu hayo guriga waxaa loo tixgeliyaa in ay noqdaan nadiifin joogto ah iyo jeermis dilida baqashada, cabitaanka iyo quudinta.
Meesha ay bakaylaha yaryar ku hayaan, suxuunta ayaa la nadiifiyaa dhowr jeer maalintii, iyadoo la isticmaalayo xal soodhaha ama xal daciif ah oo ah kaneecada kaneecada. Isbedelka lakabka qashinka (tusaale, caws ama hay) ayaa la sameeyaa ugu yaraan hal mar toddobaadkii, daaweynta dhamaystiran ee unugyada waxaa la sameeyaa ugu yaraan hal mar bishii. Dabcan, waqtiga hawlaha nadaafadda oo dhan, xayawaanka ayaa loo wareejiyaa baqshiinka kala duwan, marka laga reebo waa bakaylaha yar yar.
Si wadajir ah ula socdo saxarada waxaa lagula talinayaa in jeermiska loo isticmaalo qalabka daryeelka, sababtoo ah bini'aadanku way ku sii jiri karaan.
Sida tallaalka, waxaa jira dhowr qorshe oo daaweyn ah oo isticmaala tallaalada dhibaatooyin gaar ah - badanaa bakeyleerka cudurada dhiigga ee fayraska (UHD) iyo myxomatosis. Waxa kale oo suurtagal ah in la isticmaalo tallaalka la xidhiidha, oo ay ku jiraan qaybaha si looga hortago cudurrada labadaba. Nidaamka talaalka ee VGBK wuxuu u eg yahay tan:
Talaalka 1aad - da'da 6 toddobaad (oo leh miisaan ah xayawaan aan ka yarayn 0.5 kg);
Talaalka 2aad - 3 bilood kadib marka hore.
Mustaqbalka, si loo ilaaliyo saameyn degen, dib u isticmaalida tallaalka waa in la sameeyaa lixdii biloodba mar, iyo haddii bakaylaha badanaa ay socdaan meelaha bannaan, kadib 5 bilood kadib.
Maanta immisa tallaalka ka hortag ah ee bakteeriyada waa Rabbiwak V.
Talaalka loogu talagalay myxomatosis waxay ku lug leedahay taxanaha soo socda:
Talaalka 1aad - da'da aan ka yareyn 4 toddobaad (doorbiday xilliga guga);
Talaalka 2aad - bil kadib markii ugu horreysay;
Tallaalka 3aad - 5-6 bilood kadib tallaalka koowaad.
Iyada oo la adeegsanayo dhammaan saddexda tallaal, dib u noqosho waa in la sameeyaa laba jeer sannadkii: guga iyo dayrta, inta lagu guda jiro nolosha nolosha bakeylka.
Waa muhiim! Dhammaan tallaabooyinka kasta ee qorsheyaashu waa qasab, sababtoo ah haddii aad sameysay talaalada ugu horreysa oo ay go'aansadeen in ay ku soo noqdaan tallaalka lix bilood ka dib, waxaa loo tixgelin doonaa kuwo firfircoon, waana inaad mar labaad isticmaashaa tallaalka.
Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho labada tallaalba (laga bilaabo labadaba UHDB iyo myxomatosis), markaa waxaa lagula talinayaa inaad raacdo nidaamka soo socda:
Talaalka ugu horreeya waxaa la sameeyaa 45 maalmood laga bilaabo isticmaalka tallaalka UHD (ama myxomatosis).
Laba toddobaad kaddib waxay bixisaa tallaal ka dhan ah myxomatosis (ama UHD, haddii markii ugu horeysay loo isticmaalo cudurka myxomatosis).
Laba toddobaad oo kale kadib, waxaan marka hore hagaajineynaa tallaabada.
Ka dibna (14 maalmood oo kale) iyo saameynta tallaalka labaad.
Ka dib dhacdo 2-3 bilood ah, saameyntii la gaaray waxaa lagu xakameyn karaa tallaalka la xidhiidha ama tallaal ka dhan ah myxomatosis, oo lagu daray laba toddobaad kadib tallaalka UHD.
Mustaqbalka, tallaalka xayawaanka waxaa la sameeyaa lixdii biloodba mar iyada oo la adeegsanayo tallaalka la xidhiidha ama monovaccines, iyada oo loo kala soocayo codsiyada laba toddobaad.
Kaliya haddii dhammaan shuruudaha daryeelka, nafaqada iyo tallaalka bakaylaha la buuxiyo, ma cabsan kartid dhibaatooyinka koritaanka.